केहि गर्छन कि भनेको पार्टि पनि मारामार गरेर छुट्टेर मरे ..
Visitor is reading केहि गर्छन कि भनेको पार्टि पनि मारामार गरेर छुट्टेर मरे ..
Visitor is reading HAPPY DASHAIN WITH THIS BEAUTIFUL VIDEO WHO ARE ABROAD MISS
Visitor is reading Hindu sanskar
Visitor is reading Any GBS guys going to ANA?
Visitor is reading Bringing spouse to USA
Visitor is reading travelling companion
Posted on 01-11-19 2:26 PM Reply [Subscribe]
वैकल्पिक शक्ति निर्माण भनेको पार्टी फुटाउनु हो ? के भन्छिन् रञ्जु दर्शना ?
पुस २७, २०७५ शुक्रबार २१:४३:११ | उज्यालो
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार निवेदनमा नयाँ पार्टीको नाम विवेकशील नेपाली दल प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत विवेकशील साझाबाट अलग्गिन चाहेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ । उज्जल थापासँगै रञ्जु दर्शना, मिलन पाण्डे, प्रदेश ३ का सांसद विराज भट्ट, प्रदेश ३ कै सांसद रमेश पौडेल, सुबुना बस्नेत, डाक्टर अनुषा थापालगायतका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।
यसै विषयमा रञ्जु दर्शनासँग टेकमान शाक्यले गरेको कुराकानी
विवेकशील शाझाबाट पार्टी फुटाएर अर्कै पार्टी बनाउनुको औचित्य के हो ?
दुई पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भएपछि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेको के हो भन्ने विषयमा नै फरक बुझाई रहेको पाइयो । हाम्रो धरातलले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको भए पनि यो १७ महिनाको अवधिमा कुनै उपलब्धि भएन । त्यसैले हामीले पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेका हौँ ।
साझा पार्टीबाट आउनुभएका रवीन्द्र मिश्रसँग पदीय भागबण्डा नमिलेको कारणले पार्टी फुटेको भनेर भन्न मिल्छ ?
मिल्दैन । भागबण्डाको कुरा नै छैन यहाँ । यहाँनिर हाम्रो आइडिया नै क्र्यास भएको हो । पहिले दुई वटा दल एक भएका हौँ । त्यही दुईवटा दल अब स–सम्मान आ–आफ्नो बाटोतिर लागेका हौँ ।
तपाईँहरुबीच विचार नमिल्ने हो भने पार्टी एकीकरण गरेर किन अघि बढ्नुभयो ?
हामीलाई पनि यस्तै लाग्छ । त्यतिखेर हामी फुट्नका लागि जुटेका थिएनौँ । हाम्रा पाइलाहरुमा विद्यमान समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि समस्यालाई स्वीकार नै गर्न नसकिएपछि के लाग्छ र ? समस्यासँग जुध्न नचाहने ‘नेचर’ ले नै समस्या निम्त्याएको हो ।
पुराना शक्तिलाई झापड हान्ने भनेर तपाईँहरुले वैकल्पिक शक्ति भनेर विवेकशील शाझा पार्टी जन्माउनुभयो, वैकल्पिक
भनिएको शक्ति पनि अन्तरविरोधमा फस्यो नि होइन ?
वैकल्पिक शक्ति जन्मिएको छ र वैकल्पिक शक्ति यथावत नै छ । अव हाम्रो यो वैकल्पिक शक्तिले के–कस्ता कार्यहरु गर्छन् भन्ने कुरा फरि पनि मुल्यांकन हुन जरुरी छ ।
फुट्ने अन्तिम समाधान हो त त्यसोभए ?
फुट्ने अन्तिम समाधान होइन । काम गराई चाहिँ अन्तिम हो । काम गर्ने परिस्थिति नै नरहेपछि एकैठाउँमा बस्नुको औचित्य चाहिँ के रहन्छ र ? त्यसैले हामी छुट्टिएर नै सौहार्दपूर्ण वातावरण वनाउने बाटोतिर लागेका हौँ ।
रवीन्द्र मिश्र पनि वैकल्पिक शक्ति भनेर आउनुभएको छ तपाईँहरु पनि वैकल्पिक शक्ति नै भनेर हिँडिरहनुभएको छ, अनि फेरि
पार्टी फुटाउनुभयो । वैकल्पिक शक्ति भनेको के हो भन्ने विषयमा नै प्रश्न उठ्यो नि होइन ?
यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो प्रश्नको जवाफ समयले बताउँछ । हामी दुवै दलले गर्ने अबका कार्यक्रमहरुले कुन शक्ति वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने प्रष्ट पार्नेछ ।
Posted on 01-11-19 6:02 PM [Snapshot: 109] Reply [Subscribe]
राजनीति गर्न प्रचंडे जस्तो हुन पर्छ जता पनि ठिक्क , इमान्दारिता ले वास्तविक दुनिया चल्दैन, महाभारत को सकुनी त्यसै आको हैन.